Gabdhaha somaliyed wasmo nuucyada sifiican ma u yaqaanaan - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaan xooga wax ka oranaynaa dumarka somaliyed ee guursanaya cadaanka iney kasheegteen raga somaliyeed oo aan aqoon ulaheyn waxa ay ugu yeereen Galmada cusub.
-Dadka waxaa haga waxa ay aaminsan yihiin. hadaan somali nahay waxan leenahay dhaqan kusaleysan diinteena dhameystiran.wax walbana iyaduu illaah ku cadeeyay waxey cadeysay in ay haweenka beer uyihiin ragooda qaabkey rabaan iney ugu raaxeysan karaan balse meel kaliya iney uga galmoon karaan taa soo ah xubinta taranka.
-Wiilka somaliyaad ee kuqaba haduu fahmiwaayo sida aad kahesho iyo meelaha aad kadareen qaado adiga ayaa lagaa doonayaa inaad ulatimaado dalabka sidey naftada rabtana usheegan kara.
-Raxada kuma xirna jinsiyad ee waxey ku xirantahay jaceyl labada isqabtaa waa iney isjecel yihiin. Jaceylka laguma dhasho ee waa la abuuraa dadka iyagoon isqabin ayay jaceyl abuuraan maxaa udiiday marka la isqabo in jaceyl la abuuro oo lagu wada noolaado farxad.
-Sideed kuheleysaa raaxo waxaabad qarsaneysaa dareenkaada.aan sheegano dareenka iyo jaceylka nahayo si aan ugu noolaano farxad xurmana naloogu hayo. cunto cusbo la’aana maadan cunteen ee Raaxada bilaa jaceylka ah hala iska daayo.in jaceyl laguwada noolaado ayaa ufiican labada lamaane iyo ilmahoodaba.
DAAWO Fanaanka Nimcaan Hilaac Oo dhulka ku jiiday Beesha isaaq ee maamusha somaliland